ငွေကြေးစျေးကွက်၊ ကတ်နှင့် SWIFT ဌာနခွဲ | MFTB | Myanmar Foreign Trade Bank
Home » ဌာနခွဲများ » ငွေကြေးစျေးကွက်၊ ကတ်နှင့် SWIFT ဌာနခွဲ
SWIFT ဌာနစိတ်မှ အဓိကဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော လုပ်ငန်းတာဝန်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်-
- အဆက်အသွယ်ဘဏ်များမှ/ သို့ ပေးပို့လာသော SWIFT Message အဝင်အထွက်များအား လက်ခံခြင်းနှင့် ပေးပို့ခြင်း။
- SWIFT Message အဝင်များအား သက်ဆိုင်ရာဌာနများသို့ ဖြန့်ဝေပေးခြင်း။
- SWIFT System လုံခြုံစိတ်ချမှု ရှိစေရန်အတွက် Software Update များအား အခါအားလျော်စွာ ဆောင်ရွက်ခြင်း။
- အဆက်အသွယ်ဘဏ် တည်ထောင်ရန်အတွက် RMA လဲလှယ်ခြင်း။
- အဆက်အသွယ်ဘဏ်များမှ RMA ပယ်ဖျက်ရန် တောင်းဆိုလာပါက RMA ပယ်ဖျက်ပေးခြင်း။
MPU & Card Services
ATM Services & Card ဌာနစိပ်၏ အဓိကဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော လုပ်ငန်းဝန်ဆောင်မှုများမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည် -
Customer များကို ATM Card ပြုလုပ်ပေးခြင်း။
Customer များ၏ ATM Account များသို့ ငွေဖြည့်သွင်းပေးခြင်း။
ဝန်ထမ်းများ၏ ATM Acccount များသို့ လစာငွေများ ဖြည့်ပေးခြင်း။
အငြိမ်းစားဝန်ထမ်းများ၏ ATM Account များသို့ ပင်စင်လစာ ထည့်ပေးခြင်း။
Electronic Channel ကို အသုံးပြု၍ Customer များ အဆင်ပြေစွာ ငွေပေးချေနိုင်ရေး အတွက် ဝန်ဆောင်မှုပေးခြင်း။
ATM card dispute များဖြေရှင်းပေးခြင်း။
- POS စနစ်ဖြင့် ငွေပေးချေနိုင်သောဆိုင်ကြီးများတွင် ATM Card ဖြင့် စျေးဝယ်နိုင်ပါသည်။
- တစ်ကြိမ်ထုတ်ယူပါက အများဆုံး (၃)သိန်းအထိ ထုတ်ယူနိုင်ပါသည်၊
- နေ့စဉ်ငွေကျပ် (၅) သိန်းအထိ ထုတ်ယူနိုင်ပါသည်။
MFTB ATM CARD ပြုလုပ်ရန်
ATM Card Account ဖွင့်လှစ်ရန်လိုအပ်သည့် အချက်အလက်များ ဖြည့်သွင်းရပါမည်။ Card ကိုင်ဆောင်သူသည် အသက်(၁၈)နှစ် ပြည့်ပြီးသူ ဖြစ်ရပါမည်။
ATM CARD အကျိုးကျေးဇူးများ
မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် ATM စက်များတွင် ငွေသားထုတ်ယူနိုင်ပါသည်။
MPU Card ဖြင့် ပေးချေနိုင်သောနေရာတိုင်းတွင် ပစ္စည်းဝယ်ယူမှု့များအတွက် ငွေပေးချေနိုင်ပါသည်။
ATM Card အား (၂၄) နာရီ အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
ATM Card A/C ထဲသို့ ငွေသွင်းရန်မှအပ ဘဏ်သို့လာရောက်ရန် မလိုအပ်ပါ။
MFTB ၏ ATM Card အချင်းချင်း MFTB ၏ ATM များတွင် မိမိလွှဲပို့လိုသည့် ATM Card A/C No. သိရှိပါက အခြားATM Card A/C သို့ A/C Transfer ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။ အများဆုံးလွှဲပို့နိုင်သည့်ငွေပမာဏမှာ တစ်ကြိမ်လျှင် ကျပ်(၅)သိန်းနှုန်းဖြင့် တစ်နေ့လျှင် အများဆုံး ကျပ်(၁၀၀)သိန်းထိ လွှဲပို့နိုင်ပါသည်။
ATM CARD A/C သို့ ငွေသွင်းရန်အတွက် လိုအပ်ချက်များ
ATM Account No. ဖြင့် မိမိ Card အား ဘဏ်တွင် ငွေသားပေးသွင်း၍ ငွေဖြည့်သွင်းနိုင်ပါသည်။ ဝန်ဆောင်စရိတ် အခမဲ့ဖြစ်ပါသည်။
ATM CARD အသုံးပြုသူများ သိထားသင့်သည့်အချက်များ
မိမိလျှို့ဝှက်နံပါတ် (Pin No) အား အသုံးပြု၍ ပြည်တွင်းရှိ အခြားသော ဘဏ်များ ATM များ POS များတွင် အသုံးပြု နိုင်ပါသည်။
မိမိလျှို့ဝှက်နံပါတ် (Pin No) အား ATM စက်ရှိသည့်နေရာ၌ပင် ပြောင်းလဲနိုင်ပါသည်။
MFTB ATM CARD အား MFTB ၏ ATM စက်များတွင်သာမက အခြားသော ဘဏ်များ၏ MPU တံဆိပ်ပါရှိသော ATM စက်များတွင်လည်း ငွေထုတ်ယူနိုင်ပါသည်။
POS စနစ်ဖြင့် ငွေပေးချေနိုင်သောဆိုင်ကြီးများတွင် ATM Card ဖြင့် စျေးဝယ်နိုင်ပါသည်။
တစ်ကြိမ်ထုတ်ယူပါက အများဆုံး (၃)သိန်းအထိ ထုတ်ယူနိုင်ပါသည်၊
MFTB ATM Card အား MFTB ၏ ATM တွင် ငွေထုတ်ယူခြင်းအတွက် ဝန်ဆောင်ခ ပေးဆောင်ရန် မလိုအပ်ပါ။
အခြားဘဏ်များ၏ ATM စက်များတွင် ငွေထုတ်ယူမှသာ ထုတ်ယူသော ငွေပမာဏ၏ ၀.၅၀% ဝန်ဆောင်ခ ပေးဆောင်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။ (ဥပမာ-ငွေကျပ် ၁၀,၀၀၀/- ထုတ်ယူပါက ကျပ် ၅၀/- ပေးဆောင်ရမည်။)
POS များတွင် အသုံးပြုခြင်းအတွက် ဝန်ဆောင်ခ ပေးဆောင်ရန်မလိုအပ်ပါ။
ဘဏ်မှCard ထုတ်ယူပြီးပါက မိမိလျှို့ဝှက်နံပါတ် (Pin No) အားပထမအကြိမ် မဖြစ်မနေ MFTB ATM စက်တွင် ဦးစွာရိုက်ထည့်၍ ပြောင်းလဲထားပါ။
ATM စက်မှ ညွှန်ကြားချက်အတိုင်း ဆောင်ရွက်ပါ။
မိမိလျှို့ဝှက်နံပါတ် (Pin No) သည် အထူးအရေးကြီး၍ မိမိမှအပ သူတစ်ပါးအား အသိပေးခြင်း မပြုလုပ်ရ။
မိမိ Card အား သူတစ်ပါးသို့ ငှားရမ်းခြင်းမပြုရ။
ATM Card အား ATM စက်တွင်အသုံးပြုပါက မိမိ၏လျှို့ဝှက်နံပါတ် (Pin No) အား မှန်ကန်စွာ ရိုက်နှိပ်ပါ။သုံးကြိမ်မှားယွင်းပါက Card အား ATM စက်မှ သိမ်းဆည်း သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
ATM Card ပျောက်ဆုံးခြင်း၊ အခိုးခံရခြင်း၊ လျှို့ဝှက်နံပါတ် (Pin No)မေ့ခြင်း၊ ပျက်စီးခြင်း၊ မိမိ Card အားစက်မှ သိမ်းယူခြင်း၊ Card ပိုင်ရှင်ကွယ်လွန်ခြင်း စသည်များကြုံတွေ့ရပါ က ဘဏ်သို့ အကြောင်းကြားရပါမည်။
အကြောင်းကြားခြင်းမရှိဘဲ တစ်စုံတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါက မိမိတာဝန်သာဖြစ်ပါသည်။
ATM စက်မှ ငွေထုတ်ယူရာတွင် ငွေသားနှင့်Card အား သေချာစွာသိမ်းဆည်းပြီးမှသာ စက်အနီးမှ ထွက်ခွာပါ။
MFTB တွင် နိုင်ငံခြားငွေစာရင်းဖွင့်လှစ်ထားသူများမှ မိမိ၏ ATM Card A/C သို့ ကျပ်ငွေဖြင့် စာရင်းပြောင်းထည့်သွင်းလိုလျှင် ဆောင်ရွက်သောနေ့ရှိ MFTB ၏ နိုင်ငံခြားငွေလဲလှယ် နှုန်းဖြင့် တန်ဘိုးသင့်၍ ထည့်သွင်းပေးပါမည်။
ATM Card Account ကိုတစ်ဦးတည်း အမည်ဖြင့်သာ ဖွင့်လှစ်ခွင့်ရှိပါသည်။ တွဲဖက်စာရင်း ဖွင့်ခွင့်မပြုပါ။
No.MFTB ATM CARD
ငွေထုတ်ယူခြင်း MFTB ATM
( ဝန်ဆောင်ခ ) ၀.၅၀ %
ကျပ် ၅ သိန်း
Transaction ( ၁ ) ကြိမ်လျှင်
ကျပ် ၃ သိန်း